Somaliland: Bandhigga Carwada 14aad ee Buggaagta Hargeysa HIBF Oo La Daahfuray iyo Waxyaabaha Ku Cusub - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Hargeysa (ANN) – Bandhigga Caalamiga ah ee Buuggaagta (Hargeisa International Book Fair) ayaa maanta si rasmi ah looga furay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, taas oo socon doonta muddo lix maalmood ah.
Bandhigga sanadkan ee #HIBF2021, ayaa oo noqonaya kii 14aad ee ay qabato xarunta dhaqanka Hargeysa, waxaana sannadkan halkudheg looga dhigay “Deris-wanaagga”, isla markaana wax marti ku ah dalka Ethiopia oo agabkiisa hiddaha iyo dhaqanka iyo taariikhdiisa dhaqan ee uu leeyahay lagu soo bandhigay carwada sanandkan 2021.
Furitaanka banhdiga Buuggaagta Carwada Hargeisa International Book Fair 2021.
Madaxweyne Kuxigeenka Somaliland. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil (Saylici) oo sannad walba lagu maamuuso daah-furka Bandhigga, Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyi-gelinta Somalland Saleebaan Cali Koore, Ergayga Somaliand u qaabilsan wada hadalada Soomaaliya Marwo Edna Aaden Ismaaciil, Wasiirka Maaliyadda Somaliland Dr.Sacad Cali Shire, Guddoomiyayaasha saddexda Xisbi Qaran, wufuud ka kala socotay, Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Ghana, UK, Taiwan, Czech Republic and European Union, dalalka Somaliland ay deriska yihiin ee Ethiopia, Djibout, Dublamaasiyiin, Ganacsato, Qorayaal iyo marti sharaf kale.
Jama Muse Jama Guddoomiyaha Xarunta Dhaqanka Hargeysa,Image file Araweelo News Network, 24 July 2021.
Guddoomiyaha Xarunta dhaqanka Hargeysa, isla markaana ah Aasaasaha Xarunta Caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ka hadlay Bandhigga, ayaa yidhi, “Waxaynu isugu nimi bandhigii 14aad ee Bandhiga caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeisa, oo qeyb ka noqday taariikhda qarankan iyo umaddan Somaliland. Carwada Buugaagta sannadkasta waxa cusub ayaa jira, dalka inoo martida ahi waa Ethiopia, sannadkan 2021 halku dhigu waa ‘Deris Wanaaga. Sannadkii hore waxa joojisay carwada xannuunka COVID 19-ka.
Ambassador Nicolas Berlanga iyo Cabdirashiid Dahabshiil Carwada Buuuggaagta ee Hargeysa 24 July 2021.
Bandhigani waa laba bandhig oo is-gaadhay,dadka imanaya badnaantooda, dhalinyarada gobolada Somaliland ka imanaysa badnaantooda, iyo dalalka Djibouti iyo Ethiopia awoodda baddan ee ay saareen inay inooga yimaadaan dad gaadhaya 50-Qof oo isugu jira Wasiiro, Xildhibaano, Shaqaale, oo ay la socdaan Qoraayaal, Fanaanniin iyo Gabayaagii. Runtii aad ayaan ugu farxay oo ay kaga duwan tahay kuwii hore”.
Biniyamu Shetu, oo hoggaaminayay kooxda hiddaha iyo dhaqanka ee ka socotay dalka Ethiopa oo dareenkiisa cabirayey, ayaa waxa uu yidhi, “Annagu waxaanu ka nimi Itoobiya oo ka kooban qoomiyado badan, qoomiyad-kasta waxay xidhaan dharka dhaqanka oo u gaar ah. waa markii noogu horeysay ee aan ka soo qeybgalno bandhiga Caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa maadama aanu African nahay isku dhaqan ayaanu nahay Somaliland.”
Wasiirka Dhalinyarada, Dhaqanka iyo Dalxiiska Jamhuuriyadda Jabuuti Hibo Muumin Casoowe oo bandhigaasi ka hadashay waxay tidhi, “Anigu waxaan jecelahay inay halkan isugu yimaadaan dad Buuggaagta iyo dhaqanka jecel. Bandhigga Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa way da’ yar tahay oo way 14-jirsaday, aniguna kuma cusbi, waa markii 5aad ee aan ka soo qebgalo. Deris-wanaagga waxa ugu weyn ta bini’aadamka, ta u horeysa ee aan ku walaalownay ee aynu ku deris wanaag fiicanahay waa bini’aadanimada. Hooyaday, ILAAHAY ha u naxariiste, waxay nagu boorin jirnay inaan Deris wanaaga aan ka shaqeyno. In deriska la ogaado waxna la wada cuno waa mid muhiim ah.”
Ka qaybgalayaasha Furitaanka banhdiga Buuggaagta Carwada Hargeisa International Book Fair 2021.
“Waxa ii Sharaf ah inaan ka soo qeybgalo Bandhiga caalamiga buugaagta Hargeysa, oo aan ahayn markii kowaad ee aan ka soo qebgalno, iyada oo aan kaga soo gayb-galnay qeybihii kala duwana, sida qeybta Akademiga Jaamacadda Jigjiga, Masuuliyiinta iyo dhalinyarada, sharaf gaar ah ayay noo tahay inaan ka soo qeyb-galno oo nimaadno magaaladayada labaad. Waxaan ku bogaadinayaa Dr. Jama Muuse Jaamac hawshan uu macalinka noogu yahay haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed, deegaanka ay doonaanba ha joogaan hadday tahay Soomaaliya, ama Somaliland ha joogaan ama Ethiopia ha joogaan ama Jabuuti, waxa uu noo yahay hormuud aan wax badan kaga dayan doono, annaguna ka-dawlad deegaan ahaan waxyaabo badan ayaanu ka baran doonaa Somaliland”, Sidaas ayuu yidhi,Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad-deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Maayarka Caasimadda Hargeysa Cabdikariin Ahmed Moogge ayaa isagoo ku hadlayey magaca caasimadda soo dhaweeyey wufuuddii ka kala socotay caalamka ee ka qayb-galay Bandhiga Caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa, waxaanu bogaadiyey doorka ay ku leedahay horumarka Dhalinyarada.
“Annaga oo ku hadlayaa magaca Caasimada Hargeysa waxaan aqoonsanay muhiimada bandhiga Buuggaagta caalamiga ahi uu u leeyahay dhalinyarada, waxaan u mahad naqayaa intiina ka soo qeybgashay,waxaanan idiin rajaynayaa nasiib wanaagsan, waxaanan rajeynayaa inaad wakhti koobaan u heshaan magaalada, waxna ka ogaataan sida loogu nool yahay,si weyn ayaan idiin soo dhaweynayaa,” sidaas ayuu yidhi Duqa degmada Hargeysa.
Professor Siciid Saalax oo ka mid ah suugaan-yahanka iyo af-yaqaanka Soomaalida ayaa sharxay muhiimadda bandhiga Buuggaagtu u leeyahay bulshada iyo is-dhexgalka dadka iyo dalalka deriska ah, isagoo ka sheekeeyey qiimaha ay lahaayeen hal-ku-dhegyadii hirgalay ee lagu suntay Bandhigga Caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa tobankii sanno ee u dambeeyey.
“Halkudhegga sannadkan oo sida loo sheegay daba-jooga sannadihii badnaa ilaa 2012-kii waxaynu soo odorosnay hilaadda timaaddada. 2013-kii sadcaal ayaynu ahayn, 2014-kii mala’awaal ayaynu joognay, 2015-kii baradaada ayaynu qotonay,2016-kii hoggaaminta iyo hal-abuurka ayaynu hadal-haynay, 2017-kii Xidhiidhsami ayaynu u bixinay, 2018-kii Murti ayaynu naqaynay, 2019-kii waa Socday Wada lahaanshaha iyo islahaanshuhu, 2020-kii halku dheggu waxa uu ahaa COVID 19-ka, oo ahaa inaan la isku iman oo afka la saabto, oo la kala maqnaado, hal-ku dhegga sannadkan 2021 waa Deris wanaag”, sidaas ayuu yidhi Prof Siciid Saalax.
“Waxa Sharaf weyn inoo ah inaan maanta ka soo qeybgalo bandhiga 14aad ee Buugaagta Caalamiga ah ee Hargeysa, waxaan ku bogaadinayaa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah aasaasaha Bandhiga Buugaagta Hargeysa, ahna nin aad u qiima badan,qaranka Somaliland-na mahad weyn ugu hayo adkaysiga badan iyo halka uu ka soo bilaabay, iyo mudada dheer ee uu soo waday ee uu ka midha-dhaliyay inuu maanta indhaha caalamka ku soo jeediyo Somaliland, haddanu nahay Xukuumaddana waanu ku garab taaganahay”, Sidaas ayuu yidhi, Cabdiraxmaan Saylici.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ka hadlayey muhiimadda Bandhigga buugaagta Hargeysa, waxa kale oo uu yidhi, “Bandhigga Buuggaagtu waxa uu kobcinayaa garaadka dhalinyaradeena, garaadka aqoonyahankeena, waxa isugu yimi intaas oo aqoonyahan oo laga faa’iideysanayo oo ka kala socda daafaha caalamka. Sannadkan waxa la soo qaatay derisnimada, waxay ka bilaabantaa aqalka kugu xiga, sidaas ayay u soconaysaa, mujtamaca kugula nool Magaalo, dalka kugu xiga, dunida oo dhan.
Safiirka dowladda Taiwan u fadhiya Somaliland Allen Chengwa Lou, ayaa dhankiisa ka dareen-celiyey sida uu u arko Bandhigga Caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa, waxaanu xusay inay Somaliland iyo Taiwan kawada shaqeyn doonaan carwooyin iyo bandhigyo kuwan oo kale ah, kuwaas oo wax lagu kala korodhsanayo mustaqbalka.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo wacygelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa uga mahadceliyay dalalka Ethiopia Iyo Djibouti kasoo qeybgalka Bandhiga Buuggaagta Caalamiga ah ee Hargeysa, isagoo dhinaca kale ku dheeraaday muhiimadda ay leeyihiin qoraalka iyo dhiganayaashooda.
Md. Koore waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan sameynta Xafiis faaf-reeb oo khubarada qoraalku ku saxaan buugaagta la qoro. “Waxaanu samayn doona Xafiis faaf-reeb oo imika faraha lagu hayo, waa xafiiska aanu isleenahay, waxaad isugu-geysaan dad khubaro ah oo sixi kara qorista buugaagta bulshada lagu soo dhex-daynayo. Waxaanu doonaynaa inaanu dhiiri-gelino qorista oo ay bulshadu ka faa’iidaysato inay dadku wax qoraan”, Sidaas ayuu yidhi Wasiir Saleebaan Cali Koore.
Wasiirka Maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shirre oo ka hadlay bandhigga Buuggaagta ee Hargeisa ayaa dhankiisa sheegay in bandhigga Caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa uu fursado badan u leeyahay dhalinyarada hadday tahay dhinaca qoraalka, dhaqanka iyo Is-dhex-galka.
Bandhigga Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa (Hargeisa International Book Fair) oo muddo toddobaad ah ka socon doonta xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, ayaa ah munaasibad-dhaqameed sannad kasta lagu bandhigo Arrimo khuseeya dhaqanka, buugaagta, suugaanta, bandhig-faneed iyo aqoon-wadaagis loo soo bandhigo wufuud ka socota in ka badan 30 dal oo sannad walba lagu soo martiqaado.
Carwada caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa, ayaa sannad kasta si gaar ah loogu maamuusaa mid ka mid ah waddamada caalamka oo dhaqankiisa iyo hiddihiisa wax laga barto, waxaana loo asteeyaa mowduuc gaar ah oo sannad kasta halkudheg looga dhigaa bandhigga.
Dalka Masar ayaa ahaa dalkii sida gaarka ah ee loogu maamuusay bandhiggii ugu dambeeyey Carwada caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa, waxaana sannadii ka horeeyay loogu maamusay dalalka Djibouti,2012, Boqortooyada Ingiriiska 2013, Malawi 2014, Nigeria 2015, Ghana 2016, South Africa 2017 iyo dalka Rwanda oo lagu maamusay sanadkii 2018.
Bandhigga Caalamiga ah ee Buuggaagta Hargeysa oo ay soo qaban-qaabiso Xarunta Dhaqanka Hargeysa iyo Ururka Redsea Culutural Foundation, ayaa markii ugu horreysay la qabtay magaalada Hargeysa sannadkii 2008-dii, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay munaasibad-dhaqameedka ugu ballaadhan ee ka jirta mandaqadda Geeska Afrika.